माया नर्सिङ्गको महामारीमा कमाउ धन्दा, दोब्बर भाडा असुल्दै – Nepal Press
माया नर्सिङ्गको महामारीमा कमाउ धन्दा, दोब्बर भाडा असुल्दै
२०७८ वैशाख २५ गते २०:४०
सुर्खेत । सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरस्थित माया नसिंङ्ग होमले सञ्चालन गर्ने गरेको एम्बुलेन्सले भने दोब्बर भाडा असुल्ने गरेको खुलेको छ ।
वीरेन्द्रनगर- १२ कि लता मन्जरीकी आमा कोभिड विरामी थिइन् । उनी प्रदेश अस्पताल कालागाउँमा उपचाररत थिइन् । त्यहाँबाट उनलाई आज घर लैजान भनियो र घर लैजान एम्बुलेन्सको खोजी भयो ।
‘हामीले माया नर्सिंग होमको एम्बुलेन्स बोलायौं । प्रदेश अस्पताल देखि मेरो घर सम्मको दुरी मुस्किलले १० किलोमिटर हो ।’ उनले नेपालप्रेससँग भनिन्, ‘डबल भाडा दिने भएमात्र जाने भन्दै एम्बुलेन्स चालकले धम्क्याउन थाल्यो । नेवारेमा धन्न हामीलाई बाटैमा झर्न लागेको थियो ४४ सय नै दिउला भनेपछि चालकले हामीलाई गाउँमा ल्याइदियो ।’
संकटको समयमा पीडित नागरिकलाई राहत दिनु पर्नेमा उल्टो तनाव दिइएको उनको गुनासो छ । उनको घरसम्मको एम्वुलेन्सको भाडा २२ सय भएको उनको भनाई थियो ।
सोही एम्बुलेन्स नेवारेबाट प्रदेश अस्पताल कोभिडको विारमी लिएर जाँदा अर्का एक कोभिड विरामीबाट ४२ सय रुपैंया असुल गरेको छ ।
‘हामीसँग विरामीलाई अस्पताल लैजाने उपयुक्त विकल्प नै थिएन । एम्बुलेन्सले ४२ सय माग्यो । आफन्तलाई बचाउनु पर्ने अवस्था भएका कारण पैसा ठूलो नभएको ठान्दै त्यत्रो रकम दिएं ।’ अहिले प्रदेश अस्पताल कालागाउँमा उपचार गराइरहेका ती संक्रमित भन्छन्, ‘कम्तिमा जायज भाडा लिनुपथ्र्यो । संकटको समयमा गरिबका कोही पनि हुँदैनन् भन्थे, सत्य रहेछ । जो पनि लुटने नै रहेछन् ।’
एम्बुलेन्स सञ्चालक मौसम ओलीले कोरोनाको समयमा सबैले डबल भाडा लिने गरेको बताए । ‘कोरोनाका विरामी ओसारपसार गर्दा डबल भाडा लिने गरेका छाैं। तपाईले अन्य एम्बुलेन्स चालकलाई पनि सोध्न सक्नुहुन्छ ।’ उनले भने ।
प्रकाशित: २०७८ वैशाख २५ गते २०:४०
2 thoughts on “माया नर्सिङ्गको महामारीमा कमाउ धन्दा, दोब्बर भाडा असुल्दै”
चालकले लिएको कुरालाई सस्था सङ्ग जोडिनु राम्रो होइन!!र, चालकले पनि यस्तो अवसरमा अनुचित फाइदा लिनु पाप हो!
संजय दलामी says:
अरु लाई पनि एसरी नै सोधौँ अनि सबैको को लागि सहयोग हुने छ ।